Ukusekela ama-Designs nge-Advanced Machining Solutions - Rihoo Industry (Hongkong) Co., Limited
Ukusekela Ukukhipha Imiklamo Nge-Advanced Machining Solutions
I-Israel â € "Ukubheja kuyadingeka cishe kunoma yisiphi isimiso semishini nezinye izinto ezidinga ukunyakaza kokujikeleza. I-Iscar inikeza izixazululo eziphelele zokuthwala izinhlelo zokusebenza ngamathuluzi asebenzayo okuhlukanisa, ukuguqulwa, ukuguqula, ukuprofetha nokuguqula ukusebenza, inkampani ichaza.
Ukuhlukaniswa kwe-Iscarâ € ™ s ukuhlinzeka ngezinhlobonhlobo ezinkulu zamakhamethrikhi wakamuva kanye namamaki e-carbide kanye ne-ceramic kanye ne-CBN efake ukuqeda ukusebenza kwezindandatho ezinzima ezifinyelela ku-64 HRc.
Uma okuthile, kuphenduka, kuphazamiseka noma kuhamba, kungenzeka ukuthi kusebenza kuyo. Ngenkathi uhlobo oluthandwa kakhulu ekuthengiseni emakethe ibhola elibhekene, amabhethri okugqoka, inaliti, i-tapered, i-spherical ne-thrust bearings nayo ivame. Izindleko zilingana nobukhulu obuvela kumadayimitha amancane afana no-2 mm ngezinhlelo ze-elekthronikhi kuze kufike kumamitha angu-6000 mm ikakhulukazi ukuze kusetshenziswe umoya wamandla.
Uma kuziwa ekuthwaleni, esinye sezimboni ezidinga kakhulu namuhla yimboni yezimoto. Yonke imoto inesilinganiso esingu-100-150, kanti izithuthuthu ziphakathi kuka-25-30. Njengoba isilinganiso sonyaka sokukhiqiza sezimoto ezingaphezu kwezigidi ezingu-93 kanye nezithuthuthu eziyizigidi ezingu-140 ngonyaka, isidingo sokubheja sikhulu kunanini ngaphambili futhi siyaqhubeka sikhula. Isidingo sokubheja sibuye sikhule nakweminye imikhakha yezimboni ezifana nokukhiqizwa komshini, imishini kagesi, ukwakhiwa kanye nemishini yesikhungo, ukuhamba kwezindiza kanye nokukhiqiza amandla. Ngokusho kuka-Iscar, onjiniyela bayo abanolwazi bakwazi ukusekela noma yikuphi ukuklanywa kwemiklamo enezixazululo ezithuthukisiwe ezingaqinisekisa ukusebenza okuphezulu, ukusebenza kahle nokucacile.
Iziningi ze-Iscar ezifakiwe zenzelwe ukufaka ama-multi-corner, njenge-Penta, futhi zifaka izinzuzo zomnotho ngenxa yamaphethelo abo ayisihlanu, inkampani ithi. Lokhu kufakwa kusetshenziselwa ukuhlukaniswa kwemisebenzi, ukufakwa kwe-seal groove kanye ne-raceway grooving. Isakhiwo esiyingqayizivele se-Penta ifaka amandla ukugaya izinombolo ezingenamkhawulo zamabomu ahlukene nama geometri ngezindleko ezikhangayo kakhulu ngasemaphethelweni, ngakho-ke kusiza amakhasimende ukunciphisa izindleko zokukhiqiza nokwandisa ukuncintisana.
Ukufaka ngezinhlangothi ezinhlanu zokusika kungasetshenziselwa ukuhanjiswa, ukuhlukanisa
Ukufakwa kwe-Penta nakho kungasetshenziselwa ukuhamba nge-axial, ukusebenza kwe-axial yokuhlukanisa indandatho eyodwa ebunjiwe ibe izindandatho ezimbili zangaphakathi nezangaphakathi. Ukusebenza okunjalo, u-Iscar uphinde unikeze ezinye izinhlobo zokufaka ezifana ne-BGR ne-BGMR ngamasongo awandayo aqondisa ukusebenza okujulile kokuhlukanisa.
I-Iscar iphinde isungulwe izinhlelo eziningi zokuhlukanisa amakhasimende afaka iqoqo lezinhlamvu zokuhlukanisa noma ama-adapters eklanyelwe ukuhlukanisa izindandatho ezimbalwa ngesikhathi. Amaqoqo anjalo anikezwa ukufakwa kwe-Tang-Grip ne-Do-Grip, futhi nokufakwa kwe-Penta. Lezi zinhlelo zokuhlukanisa zifinyeza ngokuphawulekayo omunye wemisebenzi ejwayelekile ekukhiqizeni ukukhiqiza.
Imikhiqizo yokuhlukanisa ehlukile ka-Iscar inikezwa ngamasayizi amancane kakhulu anika abakhiqizi ukuba banciphise kakhulu ububanzi bokufakwa, kuze kube ngu-0.7 no-1.0 mm, ngakho-ke ukulondoloza ezintweni ezibonakalayo, ukugcinwa okusiza ukukhiqiza kufika ku-15% ngaphezulu kufaka wezintambo ezikhona zensimbi, inkampani iyachaza.
Ukusebenza kokuphetha kokugcina kokugcina okunamandla kuze kube ku-64 HRc, ukuhlukaniswa kweqembu lenkampani kunika izinhlobo eziningi zamakhemikhali amakhemikhali namakhamera we-carbide kanye nokufakwa kwe-ceramic kanye ne-CBN. Ukufakwa kwe-CBN nge-chipformers kuyisisombululo esiphezulu sika-Iscar sokusebenza okunjalo futhi singashintsha kalula izinqubo zokugaya ezibizayo.
Ukusebenza okubanzi okufakela imishini kumishini eminingi ye-spindle kungabhekiswa ngokufakwa kwe-Iscarâ € ™ s V-Lock ne-FTB enikeza isisombululo samaphrofayela amaningi aphakathi kuka-10 kuya ku-51 mm ububanzi.
Izindwangu Zommbila Izihloko Ezibhekene Ne-Riyadh Nge-Automechanika Ngo-February 2018